Istaraatiijiyad Ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo noogu Fiican abid | Martech Zone
Axad, Febraayo 21, 2016 Isniin, February 22, 2016 Douglas Karr
My Podcast suuq geynta Saaxiibkay, Erin Sparks, wuxuu jecel yahay inuu waqti adag iga siiyo ku saabsan istiraatiijiyadda xulashada Martech Zone. Kahor intaanan kahadlin waxa aan tijaabinay iyo waxa soo shaqeeyay, waa inaan sharaxo muhiimada iimaylka. Haddii aad u fiirsanaysay daabacaadda khadka tooska ah mashiin ahaan, qabashada cinwaanada emaylka waa - illaa iyo hadda - waa habka ugu hufan ee ku soo celinta booqdayaasha ku habboon ee ku soo noqda bartaada.
Xaqiiqdii, waan tegayaa illaa inta aan idhaahdo liiska cinwaanka emaylkaagu waa istiraatiijiyadda ugu halista badan iyo codka ee boggaagu yeelan karo. Waa sababta aan u dhisnay kuweenna adeegga emaylka ee WordPress. Saldhig macmiil koraya oo ku yaal bartaada ayaa ah metric ugu fiican Aqoonsiga caafimaadka iyo kaqeybgalka waxyaabahaaga. Markuu booqdaha macaamiisha ahi kugu soo dhoweeyo kuna soo dhoweeyo sanduuqooda sanduuqa (oo ay u badan tahay inuu hore u buuxsamay), waxay ka dhigan tahay inay ku kalsoon yihiin qiimaha ururkiinu keeno.
Soo Bandhigida Matka Soo Dhaweynta
Waxaan tijaabinay tan oo ah qalab kala duwan oo aan isku dayno qabsan cinwaanada emaylkeena warsidaheena - laakiin ilaa maanta, mid kaliya ayaa si fiican u qabtay. Xaqiiqdii, waxaan halkan ka helnaa cinwaano emayl ah halkan iyo halkaas oo aan ku isticmaalno aaladaha aan adeegsanno. Oo waxaan si daacad ah uga fogaaneynaa qorshooyinka si aan ugu soo jiidanno martida inay uqortaan sida xaaqmooyinka iyo wax bixinta. Waxaan dooneynaa macaamiil dhab ah oo macaamiisha ah maxaa yeelay waxay aqoonsadaan qiimaha aan u keenno. Wargeyskeennu wuxuu had iyo jeer bixiyaa waxyaabo kala duwan oo ku saabsan iibka iyo xirfadlayaasha suuqgeynta si ay u baaraan, u ogaadaan una bartaan sida loo isticmaalo tikniyoolajiyadda suuqgeynta si loo hagaajiyo natiijooyinka ganacsiga.
A soo dhoweyn waa bog buuxa oo u muuqda booqdayaasha cusub, riixaya bogga hoosta bogga, oo ka codsanaya booqdaha inuu isdiiwaangaliyo. Boggayaga, waxay u egtahay sidan:
Kaliya ma shaqeyneyso, si la yaab leh ayey u shaqeysaa. In kasta oo xeelado kale ay noo heli doonaan dhowr darsin oo macaamiil ah bishii, Mat-ka Soo-dhaweynta ayaa naga helaya dhowr darsin macaamiil ah. maalin kasta. Xaqiiqdii, maalin maalmaha ka mid ah waxaan haysannay in ka badan 100 macmiil oo iska doorta. Mawduuceenna Soodhawaynta ayaa ka beddeleysa in ka badan 100 jeer ka wanaagsan istiraatiijiyad kasta oo kale oo aan geynay.
Si ka duwan sida loo yaqaan 'popup' ee qofka hakad galiya ka dib markuu bilaabo inuu wax akhriyo, habkani wuxuu weydiisanayaa inay iska diiwaangeliyaan ka hor intaysan bilaabin. Haddii aysan rabin, waxay dhahaan maya ama hoos ugu rog bogga. Barmaamujku wuxuu kaloo na siinayaa fursad aan dib ugu dhigno muujinta xulashada markale. Oo waxaan ku tijaabin karnaa noocyo kala duwan qalab-casriyeysan oo la casriyeeyay si loo arko haddii mid ka fiican kan kale ka shaqeeyo.
Ku kori Kordhinta Websaydhkaaga SumoMe
The Soo dhawow Mat waa mid ka mid ah dhowr qalab oo shaqeynaya oo wax ku ool ah si loo kobciyo heerarka beddelaadda boggaaga. SumoMe aaladaha taraafikada ayaa hadda la rakibay oo loo qaabeeyey in ka badan 200,000 oo bog internet ah! Iyo tan ugu fiican oo dhan - madalku wuxuu bixiyaa in ka badan toban qalab oo kaa caawinaya inaad waddo beddelaad iyo inaad kordhiso waxqabadka boggaaga.
Haddii aad maamusho degel WordPress ah, SumoMe sidoo kale waxay bixisaa WordPress Plugin si aad si fudud ugu bilowdo. SumoMe sidoo kale waxay leedahay kumbuyuutar Chrome ah, oo marin u helkooda qalabkooda si fudud sida gujinta badhanka. Waxa ugu wada fiican, waxay had iyo jeer ku darayaan habab cusub oo lagu kobciyo liiska emaylkaaga, dhiirrigelinta wadaagista bulshada, iyo cabbiraadda waxqabadka boggaaga iyaga oo adeegsanaya Analytics qalab.
Waxaan iskaashi la yeelanay SumoMe si aan kuu bilaabo - hadda iska qor si aad u hesho a darsin qalab ah kharash la'aan!
Isku day SumoMe BILAASH!
BigCommerce waxay soo saartaa 67 Dulucda E-ganacsiga cusub
Febraayo 22, 2016 saacadu markay tahay 9: 15 AM
Shaqo wanaagsan Douglas. Waxaan dhagsiiyey xiriiriyaha barta Twitter-ka waana hubaa inay igu filan tahay in lagu soo dhoweeyo gogosha soo dhaweynta ee aad u sii socotay inaad wax ka qorto. Kama horjoogsanayo waxyaabaha aan u joogo halkaas si aan u arko laakiin wali si muuqata ayaa muuqata.
Runtii ma aanan galin cinwaankayga emaylka, laakiin waxaa laga yaabaa inaad i heli doontid waqtiga soo socda 😉
Febraayo 22, 2016 saacadu markay tahay 9: 39 AM
Miyaad tijaabisay A / B tijaabada shaashadda qabashada hoggaanka ee soo muuqaneysa marka isticmaalehu uu KA BAXAYO bogga internetka? (shaashad buuxda sida "Welcome Mat" waxay noqonaysaa "Bye-bye Mat" tusaale 😉)
Sababta Ma arko sababta isticmaale, u imanaya websaydhkaaga markii 1aad si uu u akhriyo qoraal, wuxuu halis ugu jiraa inuu "lumiyo" fursad uu ku aqriyo qoraalkaas adoo siinaya cinwaankooda isla markiiba (oo ay suuragal tahay in loo weeciyo kuwo kale bogga) adigoon marka hore aqrinin boostada lafteeda si aad u ogaato in tayadiisu runti ay mudan tahay in laga tago cinwaanka emaylkiisa…
Haddii aad horay u sameysay imtixaanka A / B, sidee u sharraxeysaa inay dadku u badan yihiin inay diyaar u yihiin inay ka tagaan cinwaankooda cinwaanka ka hor inta aysan akhrin mawduucaaga halkii ay ka akhrisan lahaayeen waxyaabahaaga?
Feb 22, 2016 markay ahayd 4:39 PM
Xiiso leh, Toni. Anigu khabiir kuma ahi naqshadeynta websaydhka si uun. Sideed ugu dhaqaaqi laheyd fulinta taas haddii ay ka baxayaan goobta? Iyadoo pop-up ah markay gujinayaan "x"?
Feb 23, 2016 markay ahayd 3:45 PM
Hey Dean, taatikada la adeegsaday ayaa loo yaqaan ujeedada bixitaanka, asal ahaan waa qoraal fiiriya xawaaraha tilmaamaha jiirka iyo jihada. Markuu qofku jiirka u riixo dhanka cinwaanka cinwaanka ama badhanka gadaashiisa, waxaa soo baxa soobaxa.